Alshabaab oo meel fagaare ah ku toogtay affar qof | Berberanews.com
Home WARARKA Alshabaab oo meel fagaare ah ku toogtay affar qof
Alshabaab oo meel fagaare ah ku toogtay affar qof
Muqdisho (Berberanews) – Kooxda Al-shabaab ayaa Fagaare ku dilay Saddex Nin oo ay ku eedeeyeen Basaasnimo.
Saddexda Nin ayaa gelinkii dambe ee Shalay lagu toogtay Fagaare ku yaalla degmada Kamsuuma ee gobolka Jubbada Hoose ee Dalka Soomaaliya, ka dib Markii maxkamad Al-shabaab leedahay sheegtay inay ku heshay Dambi ah inay Basaasiin u ahaayeen Dawlado Shisheeye.
Maxkamadda deegaannada Al-shabaab maamusho ee Gobollada Jubbooyinka ayaa saddexda Nin ku xukuntay Dil toogasho ah, xukunkaasi oo ay Goob fagaare ah ku fuliyeen Al-shabaab.
Ragga ay Al-shabaab Toogatay ayaa Magacyadooda lagu sheegay, Muuse Xuseen Siyaad oo 31 sano jir ahaa, waxaana Warbaahinta Al-shabaab sheegtay inuu ka mid ahaa Ciidamo uu Soomaaliya u tababbaray Maraykanku.
Xuseen Maxamed Cabdi (Arsal) oo 20 sana jir ahaa ayaa Warbaahinta Al-shabaab sheegtay inuu ka mid ahaa Ciidammada Jubbaland iyo Falliidh Yaroow Cali oo 75 sana jir ahaa ayaa isagana Al-shabaab ku eedaysay inuu la shaqaynayey Ciidammada Kenya.
Iiraan oo dishay ganacsadihii maandooriyaha
Iiraan ayaa waxa ay dishay ganacsade weyn oo maandooriyaha ka shaqeysta kaas oo lagu naanayso “Yaxaaska Gacanka Beershiya”, sidoo kalana ay halkaas ku baabi’isay maandooriyihii uu tahriibinayay, warbaahinta dowladda ayaa sidaas ku warrantay.
“Yaxaaska” ayaa waxaa la qabtay isagoo kuguda jira dhoofinta in ka badan 100 tan oo maandooriye ah oo uu marsiinayay biyaha caalamiga ah, saraakiisha ayaa sidaas sheegay.
36-jirkan iyo caawiyahiisa ayaa la dilay kaddib sanado badan oo ay socdeen howlgal sirdoon.
Iiraan ayaa sanadwalba waxa ay khaarijisaa boqollaal maxbuus.
Hay’adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegaysa in dalkaas uu 2018-kii dilay ugu yaraan 253 qof. Taas waxa ay ka dhigan tahay in dilku uu hoos u dhacay 50% markii la fiiriyo tirada la dilay sanadkii kaas ka horreeyay ee aheyd 507, waxaana sababta lagu sheegay in isbadelka lagu sameeyay shuruucda adag ee u deggan ka hortagga maandooriyaha.
Hasayeeshee maandooriyaha heer caalami ayaa weli waxa uu sababi karaa in qofkii lagu qabtaa la dilo.
“Ninkan lagu naanayso ‘Yaxaaska’ waxa uu ku howlgalayay magacyo iyo qaabab kala duwan” ayuu dacwad oogaha gobolka Hormozgan, Cali Saalixi u sheegay wakaaladda wararka ee ISNA.
“Waxa uu hogaamiyay mid ka mid ah shabakadaha ganacsiga maandooriyaha ee ugu halista badan ee ka jira Iiraan iyo gobolkaba,” ayuu yiri.
Xubnaha kale ee burcadda ayaa waxaa lagu xukumay xabsi gaaraya ilaa shan sanadood iyo ganaax culus, ayuu yiri. Burcadda ayaa waxa ay wadeen hannaan ay lacago sharci darra ah isaga kala gudbinayaan taas oo ay u isticmaalaan ganacsiga maandooriyaha iyo inay ku iibsadaan guryo isku xiran, kuwaas oo qaarkood ay dowladda la wareegtay.
Huwiyadda rasmiga ah ee ninkan lagu naanaysay “Yaxaaska”, ayey mas’uuliyiintu diideen inay shaaciyaan, hasayeeshee waxa ay sheegeen in magaca hogaamiyaha la dilay loo soo gaabiyo “AZ” halka caawiyahiisana loo soo gaabiyo “MH”.
Previous articleIiraan oo dishay ganacsadihii maandooriyaha
Next articleDoorashada Maraykanka 2020: Khatarta Ugu Weyn ee Dunida Kusoo Fool leh! W/Q:-Hussein Adan Cige